Ciidamada Kaalinka 5aad oo Kobta ay Doonaanba ka Taga Kilalada Somalida – Rasaasa News
Ciidamada Kaalinka 5aad oo Kobta ay Doonaanba ka Taga Kilalada Somalida
Oct 10, 2009 Kaalinka 5aad, Kaalinka 6aad, Kaalinka 7aad, Safaarada Itobiya
Kaalinka 5aad oo ah Kaalinka ugu awooda badan Kaalimada Somalida Itobiya ayey ciidamadiisu ka sameeyaan wax alla waxay damcaan dhamaan Kaalimada kale ee Somalida. Ciidamada loo yaqaan ciidanka New Police, oo laga lee yahay Kaalinka 5aad ee somalida ayaa ah kuwa ugu tababarka iyo qalaba wanaagsan ciidamada ka jira Kaalimada kale ee Somalida, waxayna ciidamadani tagaan meel kast oo ka mid ah dhulka ay Somalidu degto.
Ciidamada Kaalinka 5aad ayaa habeen hore waxaa ay galeen magaalada Galkacyo oo ka tirsan Kaalinka 7aad ee Somalida Itobiya, waxayna gaysteen waxyeelo dhimasho iyo dhawacba leh. Ciidamadan oo watay 2 baabuur oo gaadiidka dagaalka ah ayaa waxaa ay magaalada Galkacyo soo galeen Abaarihii 8:00 fiidnimo wakhtiga bariga Afrika, wakhti gaaban ka dibna waxay weerareen guri ay deganaayeen muwaadiniin dad ka soo jeeda Kaalinka 5aad ee Somalida Itobiya oo iyagu halkaas muddo joogay.
Sidda ay sheegayaan wararka ka imanaya magaalada Galkacyo ee Kaalinka 7aad, waxaa guriga ay ciidamada Kaalinka 5aad werareen ay ku dileen, hal ruux, labana way dhaawaceen, labada dhawacantay ayey la tageen mid ka mid, ka dibna jidka ayey ku tuureen isaga oo dhaawac ah.
Maamulka Kaalinka 7aad ayaa aad uga xumaaday gacan dhaafka ay u gaysteen ciidamada Kaalinka 5aad, waxayna ku cawdeen in aan la ogaysiinin kolka uu falkani dhacayey iyo waliba kolka ay soo galayeen ciidamada Kaalinka 5aad, gudaha Kaalinka 7aad ee magaalada Galkacyo.
Maamulka ayaa waxaa uu yidhi “heeshiisku wuxuu ahaa in farta na loogu fiiqo cid alaale cida uu doonayo Kaalinka 5aad ee Somalida Itobiya, mase ahayn in uu Kaalinku qabto shaqadii aanu anagu qaban lahayn”.
Ciidamada Kaalinka 5aad ayaa waxay ka hawl galaan Kaalimo badan oo ah dhulka Somalida Itobiya, meelaha ugu shisheeya ee ay ka hawl galaana waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo aan iyada wali la sheegin Kaalinka ay noqondoonto, colaad darteed, waxaase la filayaa in loo samayndoon Kaalin kolka ay dhamaato muddada uu xilka haynayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hada ah madaxweyne afka ah.
Waxaa dhibaato in dadka meel walba lagu laynayo ee ugu dhibaatada badani in ay ka soo jeedaan Kaalinka 5aad oo isagu ah Kaalinka ugu da,ada weyn Kaalimada Somalida oo isaga dadkiisu ay diidan yihiin in ay qaataan Kaalin.
Waxaana ay leeyihiin Kaalinka 5aad Jabhad [ONLF] oo iyadu si xoog leh uga soo hor jeeda siyaasada is balaadhinta ah ee ay Itobiya ka wado geeska Afrika ee ku wajahan dadka Somalida ah. Hadii ayna ka waantoobin dadweynaha ka soo jeeda Kaalinka 5aad madax adayga ay kaga soo horjeedaan isbalaadhinta Itobiya oo ay ka warhayaan dalalka ugu xooga badan aduunku, Somaliduna ay raali ka tahay, waxaa dadka Kaalinka 5aad ku dhici doona dhibaato ayna ka soo waaqsan.
Cabdulahi Aardoon ayaa ku dhintay werarka ay budhcadnimada ah ee ay ciidanka Kaalinka 5aad iyo sirdoonka Itobiya ka sameeyeen magaalada Galkacyo.
Wixii ka soo kordha wararkan dhiilada leh iyo magacyada dadka dhaawaca ah waxaan idiinku soo gudbin doona wararka dambe.
Xeradii Tababarka ee ay Kooxda Jwxo-shiil ku Lahayd Musawac oo la Xidhay